xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းအတွက် အခြားတစ်ဖက်မှ စဉ်းစားစရာများ
မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းအတွက် အခြားတစ်ဖက်မှ စဉ်းစားစရာများ
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကောင်အထည် ဖော်နေတဲ့ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကန့်ကွက်ချက်တွေ ထင်မြင်ယူဆ ချက်တွေ မျိုးစုံနဲ့ တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်မှု ပျက်ပြားအောင် တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း သွေးထွက်သံယိုမှုတွေ ဖြစ်အောင် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပုံကြီးချဲ့ကား ပြောဆိုလာတာတွေကို တွေ့မြင်ကြားသိ နေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ ရေကာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စဉ်းစားရမယ့် အချက်တွေနဲ့ သတိထားရမယ့် အခြေခံ အကြောင်းတရားတွေ အပေါ် သုံးသပ် ထားတဲ့ စာတမ်းတစ်စောင် အင်တာနက် အသိုင်းအ၀န်းများ ခုရက်ပိုင်းအတွင်း ပျံ့နှံလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီ စာတမ်းထဲက ထင်ရှားတဲ့ အချက်အချို့ကို ကောက်နှုတ်တင်ပြပါမယ်။
မျိုးဆက်သစ် ပညာရှင်များကို မွေးထုတ်ဖို့ မျိုးဆက်သစ်တစ်ခုကို အရင် တည်ဆောက်ရဦးမှာပါ။ ညူဓါတ်ပေါင်းဖို အလုံး ၂၀ စာလောက်ရှိတဲ့ ပညာရှင် အရေအတွက်ရဖို့ ဆိုရင်တော့ မျိုးဆက် ၂ ဆက်လောက်တောင် စောင့်ရဦးမှာပါ။ ကျောက်မီးသွေးနဲ့ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ကနေ လျှပ်စစ်ထုတ်ဖို့ ဆိုတာလည်း အလွန် ပိုက်ဆံကုန်တဲ့ လုပ်ငန်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်မီးသွေးက မြန်မာပြည်မှာ ပေါပေါများများ မထွက်လို့ ပြည်ပကလည်း မဝယ်နိုင်ပါဘူး။ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ကလည်း တိုင်းပြည်မှာ ၀င်ငွေမရှိတော့ ဒါကိုပဲ ရောင်းပြီး အခြား လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းနေရတဲ့ အတွက် လျှပ်စစ်ထုပ်လုပ်ဖို့အတွက် ခက်ခဲနေတဲ့ ကာလဖြစ်နေပါတယ်။ စစ်အစိုးရ လက်ထက် စစ်လက်နက် ပစ္စည်း ဝယ်ယူမှုတွေ ကလည်း ဓါတ်ငွေ့ ရောင်းရငွေနဲ့ ပေးချေနေရတာပါ။
မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်နေသူများဟာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုတာထက် နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်နေတာက ပိုများပါတယ်။ ဒါကို အကြောင်းပြုပြီး အစိုးရကို အကြပ်အတည်း ရိုက်စေဖို့ အကြည်အညိုပျက်စေဖို့ ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်တွေက ပိုများနေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ အမှန်တော့ NLD ကိုယ်တိုင် အာဏာရလည်း အဲဒီနေရာက ရေအားလျှပ်စစ်ကို မရရအောင် ထုတ်လုပ်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး ဆောင်ရွက်ရမှာက စီမံကိန်းကို ဖျက်ဆီးပစ်စေဖို့ မဟုတ်ဘဲ စီမံကိန်းကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကြိုးတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ရရှိလာတဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်က ၀င်ငွေတွေကို ကချင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အမှန်တကယ် သုံးစွဲနိုင်ဖို့ ဧရာဝတီ မြစ်ကြီးကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ကုန်ကျစရိတ်တွေကို ကျခံသုံးစွဲဖို့ ဒီစီမံကိန်းက ရလာတဲ့ နည်းပညာနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို နောက်နောင် ရေကာတာများ ဆောက်လုပ်တဲ့အခါမှာ အသုံးချနိုင်ဖို့ ရလာတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေကို တရုတ်ပြည်ကို ရောင်းချရတဲ့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ပိုမို ခိုင်မာတဲ့ သံမဏိ ဆက်ဆံရေး ထူထောင်နိုင်ဖို့ တရုတ်ပြည်သူများနဲ့ မြန်မာ ပြည်သူများ ပိုမို ချစ်ကြည်ရင်းနှီးပြီး ခိုင်မာတဲ့ အိမ်နီးနားချင်း ဆက်ဆံရေးများ တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ကမ္ဘာမှာ အထူး လိုအပ်နေတဲ့ ပြန်လည် ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာဖန်လုံအိမ် ဓာတ်ငွေ့များ ထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ကမ္ဘာကြီး သာယာစေရေးအတွက် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ကမ္ဘာက သိအောင်လုပ်ဖို့ စတဲ့ ကမ္ဘာအဆင့်မှီ ရည်မှန်းချက်များထားရှိပြီး မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို ကမ္ဘာကြီးရဲ့ လိုအပ်ချက်အဖြစ် ဂုဏ်ယူနိုင်ကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းရဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထွက်ရှိမှု ပမာဏဟာ မီဂါဝပ် တစ်သောင်း ရှစ်ထောင်ကျော် ရှိတယ်လို့ ဆိုတဲ့အတွက် ညူကလီးယား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ အလုံး ၂၀ ရဲ့ ပမာဏနဲ့ ညီမျှပါတယ်။ အချို့သော အလတ်စား ညူဓာတ်ပေါင်းဖို တစ်လုံးဟာ မီဂါဝပ် ၅၀၀ ထွက်ပြီး အကြီးစားတွေကတော့ မီဂါဝပ် ၁၀၀၀ ကျော် ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ညူဓာတ်ပေါင်းဖို တစ်လုံးရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က တစ်လုံးကို ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ညူဓာတ်အားပေး စက်ရုံ အလုံး ၂၀ လောက် ပိုင်တဲ့ နိုင်ငံဆိုတာ ခပ်ရှားရှားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ညူဓာတ်အားပေး စက်ရုံတည်ဆောက်ဖို့ ၁၀ နှစ်ခန့် အချိန်ယူရပြီး ဂျပန်ရဲ့ ညူဓာတ်အားပေး စက်ရုံများကတော့ လ ၄၀ ခန့်သာ ကြာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ အမြန်ဆုံး တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ နည်းပညာ ပိုင်ဆိုင်သူက ဂျပန် ဖြစ်ပါတယ်။ ညူဓာတ်အားပေး စက်ရုံတစ်ရုံရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဒေါ်လာ သန်းတစ်ထောင် တန်တယ်ဆိုလို့ ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀၀ ပိုက်ပြီး ညူဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တစ်ရုံကို ကမ္ဘာပတ်ပြီး ၀ယ်လို့ ဘယ်သူမှ ရောင်းမယ်မဟုတ်ပါဘူး။ နည်းပညာဆိုတာ ပိုက်ဆံပေးတိုင်း ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာမှာ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားအတွက် ရာခိုင်နှုန်း အများဆုံး အသုံးပြုတဲ့ စွမ်းအင်က ကျောက်မီးသွေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်မီးသွေး သုံးစွဲမှု ဟာ ကြောက်ခမန်းလိလိ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်ရဲ့ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ဘယ်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုကြမလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစားကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတောင် မြန်မာပြည်က ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ် စက်ရုံတစ်ရုံ တည်ဆောက်မယ့် စီမံကိန်းကို သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်တယ် ဆိုပြီး ကန့်ကွက်နေမှုများ ရှိကြပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံကြီးများဟာ မိမိတို့ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကိုသာ အဓိကထားပြီး အလုပ်လုပ်နေကြတာကို မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေး လုပ်သူ လူငယ်များ ပါးနပ်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို မကြည့်ပဲ သူများအော်တိုင်း လိုက်အော်နေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။
Coal & Electricity ကမ္ဘာ့လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုရဲ့ ၄၀% ကို ကျောက်မီးသွေးက ထုတ်လုပ်ပါတယ် Total World Electricity Generation by Fuel (2006) Source : IEA 2008 Other includes solar, wind, combustible renewable, geothermal & waste Mordern life is unimaginable without electricity. It lights houses, buildings, streets, provides domestic and industrial heat, and powers most equipment used in homes, offices and machinery in factories. Improving access to electricity worldwide is critical to alleviating poverty. Coal playsavital role in electricity generation worldwide. Coal-fired power plants currently fuel 41% of global electricity. In some countries, coal fuelsahiger percentage of electricity. Coal in Electricity Generation ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် အသံကောင်းဟစ်နေပေမယ့် ကျောက်မီးသွေးကို အလွန်အကျွံသုံးစွဲနေတယ် ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။ South Africa 93% Poland 92% PR china 79% Australia 77% KaZakhstan 70% India 69% Israel 63% Czeh Rep 60% Morocc 55% Greece 52% USA 49% Germany 46% Source: IEA 2010 The importance of coal to electeicity generation worldwide is set to continue, with coal fuelling 44% of gobal electricity in 2030. (ကျောက်မီးသွေး ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးကို သီးသန့်တင်ပြသွားမယ် ဖြစ်ပါတယ်။)
ဂျပန်မှာ လျှပ်စစ်ရဖို့ ညူစွမ်းအင် သုံးရာကနေ စက်ရုံပေါက်ကွဲတော့ ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုကို တစ်နိုင်ငံလုံးသာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးက ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင် ရေပိုင်နက်က ငါးတွေဆို နှစ်ပေါင်းများစွာ စားသုံဖို့ မဖြစ်နိုင် တော့ ပါဘူး။ ဒါကိုကြည့် ခြင်းအားဖြင့် လျှပ်စစ်မီး တစ်ပွင့် ရဲ့ တန်ဖိုးကို နားလည်နိုင်ကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်မီးတစ်ပွင့် ရဖို့အတွက် ဘယ်လောက်တောင် ပေးဆပ်ရသလဲ ဆိုတာကို ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ စက်မှုတော်လှန်ရေး ကစတာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ မြန်မာပြည်မှာတော့ အခုမှ စရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော စက်မှု တော်လှန်ရေးအစလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးကိုသာ တော်လှန်ရေး အသွင်နဲ့ သွားရမှာ မဟုတ်ပဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးကို လည်း တော်လှန်ရေး တစ်ရပ်အသွင်နဲ့ ချီတက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တော်လှန်ရေးတိုင်းမှာ အထိအခိုက် ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဧရာဝတီမြစ်ကြီးရဲ့ တန်ဖိုးကို ငါးရှာဖားရှာ၊ ရှည့်ရှာ တဲ့ အဆင့်လောက်ပဲ တန်ဖိုးထားမယ်ဆိုရင် နိမ့်ကျတဲ့ အတွေးအခေါ် တစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဧရာဝတီ မြစ်ကြီး ဟာ ဖန်လုံအိမ် အာနိသင် လျှော့ ချပေးနိုင်မယ့် လျှပ်စစ်ဓာတ် ထုတ်လုပ်ပေးရာ ကမ္ဘာ့စွမ်းအင် အရင်းအမြစ်ကြီး ဖြစ်နေပါပြီ။ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေကာတာ စီမံကိန်းက လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏဟာ လက်ရှိ မလေးရှား နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုပမာဏနဲ့ညီမျှပါတယ်။ ဒါဟာ မြစ်ဆုံတစ်ခုတည်းက ထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏကို ဆိုလိုတာပါ။ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ ဆက်လက် ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ ပမာဏတွေ မပါဝင် သေးပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်ဖျက်ရမှာက မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို မဟုတ်ဘဲ လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်မှုက ထွက်လာမဲ့ဘေး ဆိုးကျိုးတွေကို ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ ဆိုတာကို ဦးစားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မီဂါဝပ် တစ်သောင်းရှစ်ထောင် ကျော်ရဖို့ အတွက် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံက သစ်တောတွေကို ထင်းဆိုက်ပြီး လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်တာတောင် မရနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်ုတို့ တောင်းဆိုရမှာက မြစ်ဆုံစီမံကိန်းက ရလာမယ့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခ ဝင်ငွေတွေကို ဧရာဝတီ မြစ်ကြီး ထိမ်းသိမ်းဖို့ အတွက် ဘယ်လောက် ကျခံ သုံးစွဲမလဲ ဆိုတာကို ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုက်ဆံ အကုန်မခံနိုင်လို့ အင်းလေးကန်ကြီး တိမ်ကောနေတာကိုတောင် မနဲပြင်ဆင်နေရတယ်ဆိုတာ အားလုံး အသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် ဒေါ်လာ သန်းထောင်နဲ့ချီပြီး သုံးစွဲရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်ဆုံက လျှပ်စစ်ဓါတ်အား တရုတ်ကို ရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်း ပိုက်ဆံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်နဲ့ ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုလည်း အလွန်တိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို သုံးစွဲမယ့် ပြည်သူတွေဟာလည်း တရုတ်ပြည်သူ တွေဖြစ်လို့ မြန်မာနဲ့ တရုတ်နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ တရုတ်ပြည်သူများက မြန်မာပြည်သူများကို လာမယ့် သမိုင်း တစ်လျှောက်လုံး ကျေးဇူးတင်ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်သူများ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ပိုမို သုံးစွဲနိုင်တဲ့အလျောက် တရုတ်မြန်မာ နယ်စပ်က သစ်တော ပြုန်းတီးမှုကို ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်နီးနားချင်း ဖြစ်တဲ့အတွက် တရုတ်မှာ သစ်တော ပြုန်းတီးရင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွက်လည်း ရာသီဥတု ဆိုးရွားမှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာမှာ အကြီးဆုံး လျှပ်စစ် ရေကာတာများကို တည်ဆောက်နေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လည်း မြစ်ဆုံရေကာတာ အတွက် လိုအပ်တဲ့ နည်းပညာဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အဆင်သင့်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာကို စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက် လိုအပ်တဲ့နည်းပညာနဲ့ အရင်းအနှီးအတွက် တရုတ်ကို မှီခိုနေရတာပါ။ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့လို့ တိုင်းပြည်ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ သူတော်ကောင်း နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ပညာရှင် ဆိုသူတွေကို လျှပ်စစ် ဓါတ်အားရအောင် နည်းပညာနဲ့ အရင်းအနှီးမရှိပဲ ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေ ဆိုတာ ဟာလည်း အငြင်းပွားမယ့် ကိစ္စမျိုးဆိုရင် လက်ရှောင်တတ်တာမို့ မြန်မာပြည်မှာ စွမ်းအားကြီးတဲ့ ရေကာတာ တည်ဆောက်ဖို့ အတွက် တရုတ်ကို မှီခိုနေရဦးမယ် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့မှာ မြစ်ဆုံလို ရေကာတာကြီး ဆောက်ဖို့ နည်းပညာလည်း မရှိပါဘူး၊ ငွေလည်း မရှိပါဘူး၊ အားလုံး ဘာမှ မရှိလို့ တရုတ်ကိုပဲ မှီခိုနေရတဲ့အတွက် ထွက်လာတဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်ကို တရုတ်ကိုရောင်းရတယ် ဆိုတာလည်း ဘာမှမဆန်း ပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်နီးနားချင်း ပြည်သူများကို မီးလင်းစေဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ မုဒိတာ ပွားနိုင်ရမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်သူများက မြန်မာပြည်သူများကို ထာဝရ ကျေးဇူးတင်ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်ဆုံ ရေကာတာပြီးလို့ မြန်မာ ပညာရှင်တွေ ကျွမ်းကျင်လာပြီ ဆိုတော့မှ နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက် လာနိုင်တော့မှာပါ။ နည်းပညာ တစ်ခု ရဖို့အတွက် အလွန်ပဲ ပေးဆပ်ရတတ်ပါတယ်။
မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးတာ၊ အချို့သော ငါးမျိုးစိတ်တွေ ပျက်သုဉ်းတာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါဆို ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ကျလို့ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ မစဉ်းစားကြတော့ဘူးလား။ မြစ်ဆုံရေကာတာကို ကန့်ကွက်နေတဲ့ သူတွေဟာ တိုင်းပြည်အတွက် လျှပ်စစ် ဘယ်လိုရ မယ်ဆိုတဲ့ နည်းကိုတော့ ရှာဖွေပေးနိုင်တာ မဟုတ်ကြပါဘူး။ မြန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင် မပျက်စီးအောင်ဆိုပြီး ဘယ်နိုင်ငံကမှ ညူဓါတ်အားပေး စက်ရုံတစ်ခု လာတည်ဆောက်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ညူဓါတ်အားပေးစက်ရုံ ဆိုတာကလည်း အင်မတန် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ နည်းပညာ အရင်းအမြစ် တစ်ခုဖြစ်ပါသေးတယ် ညူဓါတ်အားပေး စက်ရုံးဆိုတာ ပိုက်ဆံရှိတိုင်း ဝယ်လို့ရတဲ့ အမျိုးမဟုတ်ပါဘူး၊ မြန်မာ စစ်အစိုးရဟာ ညူနည်းပညာရဖို့အတွက် ရုရှားကို မျက်နှာလုပ်ရတဲ့ စရိတ်နဲ့တင် ညူစက်ရုံတစ်ရုံဖိုး မကတော့ပါဘူး။ စစ်အစိုးရဟာ ရုရှားနဲ့ပြေလည်ဖို့ ရုရှားဆီက လက်နက်ဝယ်ရပါတယ်။ MIG တိုက်လေယာဉ်တွေ ဝယ်ခဲ့ရပါတယ်။ နည်းပညာအတွက် ပညာတော်သင်တွေ ပိုက်ဆံ အကုန်ခံပြီး လွှတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါတောင် ရုရှားဟာ သူ့တိုင်းပြည် ဝင်ငွေ လိုအပ်ချက်အတွက် MIG တိုက်လေယာဉ်တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ရောင်းခဲ့လို့ လေယာဉ်တွေ ဝယ်ယူရရှိရေးအတွက် မျက်နှာလိုမျက်နှာရ စရိတ်တွေ သက်သာခဲ့တာပါ။ အမှန်တော့ အဆင့်မြင့် ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေ ဝယ်ယူခွင့်ရှိဖို့ဆိုတာလည်း လွယ်တဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။
နည်းပညာမရှိတဲ့ တိုင်းပြည်တွေဟာ ကမ္ဘာမှာ နည်းပညာတစ်ခု ရဖို့အတွက် အမျိုးသားရေး စွမ်းဆောင်မှုအနေနဲ့ လမ်းစဉ် ချမှတ်ရပြီး တစ်မျိုးသားလုံး ဒုက္ခမျိုးစုံ ခံရလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်မတတ်ရင် ညူနည်းပညာဆိုတာ တစ်နိုင်ငံ လုံးရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ရင်းနှီးပြီး ဝယ်ယူရတဲ့အရာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာ ညူစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အနည်းဆုံး မျိုးတစ်ဆက် စောင့်ရပါဦးမယ်။ သူများတိုင်းပြည်က အလကားလာ ဆောက်ပေးတောင်မှ ကိုယ်တွယ်နိုင်မယ့် ပညာရှင် မရှိသေးပါဘူး။
ဒီဖော်ပြချက်တွေဟာ မြစ်ဆုံရေကာတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မျက်လုံးစုံမှိတ် အော်နေကြသူတွေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် အချက်များ ဖြစ်ပါကြောင်း စုဆောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 12:39 AM